चुनाव, शान्ति र मेलमिलाप
असाड ११, २०७४
बाबुराम जस्ता महत्वाकांक्षी नेतालाई झेल्नु प्रचण्डका लागि कुनैपनि हिसावले सजिलो थिएन । संविधान सभाको दोस्रो चुनावसम्म पार्टी विग्रहको अन्तिम विन्दूमा आइ सकेको थियो ।
प्रचण्डलाई चुनाव अभियानको ‘रोड शो’ मा उतारेर तत्कालीन नेताहरुले ठूलो जाल बुनेका थिए । फलस्वरुप, माओवादीले जनतामा आफनो वर्चस्व कायम राख्न सकेन । यसले गर्दा, बडो मुश्किलले आर्जन गरिएको शान्ति संस्थागत हुन सकेन ।
दशक लामो माओवादी युध्दका कारण विभिन्न सामाजिक असंगतिले थिलथिलो पारेको नेपाली समाज विस्तारै युध्दको धङधङीबाट वाहिर निस्किदैछ ।
कुनैबेला युध्दभूमिका रुपमा चर्चित कैलाली जिल्लाको धनगढी नगरमा माओवादी र कांग्रेसले चुनावी सभाका लागि एउटै मन्चले काम चलाएको रमाइलो समाचार शनिवारका समाचारपत्रहरुले प्रकाशित गरे ।
धनगढी नगरमा विहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी सभालाई सम्वोधनगर्न जुन मन्चको प्रयोग गरेका थिए, दिउँसो नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यही मन्चबाट जनतालाई सम्वोधन गरे ।
मन्चमा सजाइएको झण्डा, तोरण र साजसज्जा वदलिएको थियो । मन्चमा विहान टाँसिएका हँसिया–हथौडा छापिएको पोष्टरको ठाउँ रुख चिन्ह छापिएको पोष्टरले लिएको थियो । माओवादी कार्यकर्ताले आफनो कार्यक्रम सकिएपछि कांग्रेसका कार्यकर्तालाई मन्च हस्तान्तरण गरेका थिए ।
यसप्रकारको आपसी राजनीतिक सदभावको अवस्था सामान्य होइन । सरकारमा कांग्रेस–माओवादी समीकरणले पारेको प्रभाव पनि होइन यो । माओवादी र कांग्रेसका वीच घनिष्टता र मित्रता वढदैजानु संक्रमणकालीन राजनीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपाली कांग्रेसकासभापति तथा प्रधानमन्त्री स्वर्गवासी गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी विद्रोहीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डका वीच भएको वृहत्त शान्ति सम्झौतापछि, तत्कालै शुरु गरिनुपर्ने सहकार्य अहिले स्थानीय तह चुनावको मौसममा गरिएको छ ।
देशलाई संक्रमणकालबाट मुक्ति दिन कांग्रेस र माओवादी वीचको सहकार्य आवश्यक थियो । अहिले कांग्रेस नेतृत्वले यस्तो सहकार्यको महत्व स्वीकार गरेको छ ।
कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको प्रतिक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कांग्रेस विरुध्द आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यो अस्वाभाविक होइन ।
कांग्रेसका धेरैजसो नेता कार्यकर्ताका लागि पनि पार्टीले अपनाएको नीति वुझी नसक्नुको भएकोछ । युध्दकालमा जुन माओवादीले आपूलाई वम र गोलीको निसाना बनाए, जसले कांग्रेसका होनहार व्यक्तित्वहरुको हत्या गरे, जसले कांग्रेसीहरुलाई आफनो थात थलोबाट विस्थापित गराए, तिनै माओवादीसंग सरकारमा सहकार्य र चुनावमा तालमेल सामान्य हिसावले बुझिने कुरा पनि होइन ।
तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नु भएको वृहत्त शान्ति सम्झौताको अर्थ र आवृत्ति यही नै हो ।
विगत एक दशकको घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने नेपालमा चलेको संक्रमणकालीन राजनीतिका मुख्य जिम्मेवार हाम्रा राजनीतिक नेता नै हुन ।
सहमतिगर्ने र त्यसको पालना नगर्ने रोगले गाँजेको छ सवै दलका नेताहरुलाई । पहिलो निर्वाचित संविधान सभाको गठनपछि माओवादीले कांग्रेसलाई दिएको वचन पूरा गरेनन ।
उनीहरुले एमालेलाई आफनो सहयात्री दलका रुपमा रोजेर कम्युनिष्ट नेपाल निर्माणको कल्पना गरे । यो कल्पनामा दम थिएन । त्यतिवेला सत्ता संचालनका लागि एउटा आवश्यकता मात्रै थियो । सेनापति वदल्ने निर्णयमा माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा सामेल एमालेले साथ दिएन । त्यसपछि माओवादीले आफनो रणनीति वदले पनि ढिला भै सकेको थियो ।
माधव नेपाल, झलनाथ र बाबुरामको कार्यकालमा माओवादी पार्टीगत सन्तुलनमा रहन सकेन । बाबुराम जस्ता महत्वाकांक्षी नेतालाई झेल्नु प्रचण्डका लागि कुनैपनि हिसावले सजिलो थिएन । संविधान सभाको दोस्रो चुनावसम्म पार्टी विग्रहको अन्तिम विन्दूमा आइ सकेको थियो । प्रचण्डलाई चुनाव अभियानको ‘रोड शो’ मा उतारेर तत्कालीन नेताहरुले ठूलो जाल बुनेका थिए ।
फलस्वरुप, माओवादीले जनतामा आफनो वर्चस्व कायम राख्न सकेन । यसले गर्दा, बडो मुश्किलले आर्जन गरिएको शान्ति संस्थागत हुन सकेन ।
यतिवेला आएर प्रचण्डले बल्ल ‘रिएलाइज’ गरे – परिवर्तनलाई संस्थागतगर्ने प्रक्रिया त अल्मलिएछ । यो रिएलाइजेसनका कारण उनी संविधान निर्माणमा सजग भएर लागे । यतिवेला मात्रै उनलाई स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्झना भयो जसले उनीमाथि ठूलो भरोसा राखेका थिए ।
वैशाख १२ गतेको विनासकारी भुईंचालोलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तीन दलका प्रमुख नेताले फाष्ट ट्रयाकमा दौडिएरै, ‘एकथान’ संविधान वनाएरै छाडे ।
संविधान त वन्यो । तीन दलकानेताले जनताको इच्छा पनि वुझेनन । जनमतको जाँचपनि गरेनन । संविधान त जारी भयो । यसको सर्वस्वीकार्यता आजसम्म पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन । मधेशका समस्याले समाधान पाएका छैनन । जाति जनजातिका समस्या यथावत छन ।
संविधान सहज भै दिएको भए स्थानीय तहको चुनाव यति कोलाहलमय पक्कै हुने थिएन ।
यो सत्य हो कि कांग्रेस र माओवादी मात्र देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति होइनन । तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा अवतरण गराउने सात दलीय अभियानको नेतृत्व कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
नेपाली जनताको तर्फबाट शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउने आधिकारिक प्रतिनिधि उनै थिए । अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा यो नक्सा वदलिइ सकेको छ ।
पहिलो संविधान सभामा पहिलो दलको हैसियत राख्ने माओवादी दोस्रो संविधान सभापछि तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । यो अवनतिले माओवादीहरु जागेका पनि हुनु पर्दछ ।
माओवादीहरुले शासन–सत्ताको सुधारमा रचनात्मक योगदान गर्न सक्दछन भन्ने सावित भै सकेको छ । नेपाली कांग्रेससंगको गठवन्धन सरकारमा माओवादीको भूमिका सवैले सह«ाएका छन ।
साँच्चै भन्ने हो भने, कांग्रेस वाहेक, झण्डै समान बिचारकोवामपार्टी एमाले र अन्य वामपार्टी संगको गठवन्धन माओवादीकै लागि हानीकारक सावित भएको देखिएकोछ ।
माओवादी पार्टी वामपार्टीहरुसंगको प्रतिस्पध्र्दामा खुला हुन सक्दैन । तर, सरकारमा संगै वसेपनि कांग्रेससंग हाकाहाकी प्रतिस्पध्र्दा गर्न सजिलो छ । स्थानीय तहको चुनावले राज्यको पुनर्संरचनाको मुख्य प्रश्न एकपटक फेरी संशयमा पर्न थालेको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव प्रादेशिक चुनावपछि गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? संविधानको आपूmखुशी व्याख्याले संवैधानिक प्रक्रियालाई अपांग बनाउँछ । जुन चुनाव भएपनि चुनाव भए पुग्छ भन्ने मानसिकता घातक हुन्छ । राज्यको पुनर्संरचनालाई साँच्चै निश्चित आकार दिने हो भनेयसको निरन्तरताका लागि कांग्रेस–माओवादी सहकार्य आवश्यक छ ।
देशको कायाकल्प भएको एक दशक वितिसक्दा पनि जनताले परिवर्तनको प्रतिफलको त कुरै छाडौं, बदलावको आभाश समेत पाउन सकेका छैनन । देश विकास र राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका पार्टीहरु खोक्रो सावित भै सकेका छन ।
शासन–सत्ता आफनो हातमा लिएर पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने पार्टीका नेताहरुको साखमा प्रश्न चिन्ह लागि सकेको छ । भारतीय हस्तक्षेप र चीनियाँ सहयोगको अलाप–विलाप गरेर राष्ट्रियता वलियो हुँदैन । देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाको पालना भएको छ कि छैन ? देशको संविधानमा सवै देशवासी समेटिएका छन कि छैनन ? यी कुराहरुमा नागरिकहरु चनाखो रहनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय एकता आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै दलले यो कुरा वुझनुको बिकल्प छैन ।
चुनावले शान्ति र मेलमिलापको स्थायी वातावरण तयारगर्न सकेन भने त्यस्तो चुनावको महत्व हुँदैन ।स्थानीय तहको चुनाव सकिएको छैन । दुइ नम्वर प्रदेशमा चुनाव हुन वाँकी नै छ ।
सरकार ढुक्कहुने अवस्थामा छैन । दुइ नम्वर प्रदेशका गुनासा र समस्याहरु संवोधनगर्न समय पनि प्रसस्तै छ ।
ती गुनासा र समस्याको संवोधन हुन सक्यो भने यो संविधान स्थापित हुनेछ । सकेन भने, जतिसुकै प्रदेशमा चुनाव गराएपनि दुइ नम्वर प्रदेशमा चुनाव हुन सकेन भने यो एकथान संविधान आफनो असफलताको मलामी आफै जानेछ ।